"Rich Dad, Poor Dad" ၏အကျဉ်းချုပ် | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
"Rich Dad, Poor Dad" ၏အနှစ်ချုပ်
Robert Kiyosaki ၏စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုသူများ၏မှတ်ချက်အချို့နှင့်သင့်ကိုငါထားခဲ့ပါ ငွေရတတ်သောသူအဖေကညံ့ဖျင်းဖေ။ မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ် resumen:
- ဟုတ်တယ်၊ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရိုးရိုးသားသားတွက်ချက်ခဲ့တယ် una အကွောငျးရငျး အလွန်ကြီးသည်။ ဒါကကျွန်တော့်အပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွဲမှတ်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြွယ်ဝမှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီလမ်းကအမြဲတမ်းမလွယ်ကူပေမယ့်ငါစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါ "ချမ်းသာသောဖခင်ဆင်းရဲသောဖခင်" ငါအရမ်းမှုတ်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါကစွန့် ဦး တီထွင်သူနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်သက်တာလုံး (အထူးသဖြင့်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) အတွက်အဲဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ဒါကြောင့်အခုငါကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်အင်တာနက်ကိုသုံးနေတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်။ ဘာလဲ ရောဘတ် Kiyosaki သူသည်စာအုပ်များတွင်ပြောခဲ့သည်၊ စီးပွားရေးသည်မိုနိုပိုလီဂိမ်းနှင့်တူသည်။ စိမ်းလန်းသောအိမ် ၄ လုံးကိုဝယ်ယူပြီးဟိုတယ်အနီတွင်ဝယ်သည်။ အခုငါအင်တာနက်ကိုငါ့ရဲ့ဖန်လုံအိမ်အဖြစ်သုံးနေတယ်။
- စာအုပ်ကောင်း! ကျိန်းသေအချို့အစွမ်းထက်မဟာဗျူဟာများနှင့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူဂန္။ တသမတ်တည်းအခြေခံပေါ်မှာလျှောက်ထားလျှင်, အဲဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကမင်းရဲ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်.
- ငါစာအုပ်ဖတ်ပြီးအခြားသူတစ် ဦး ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သူတို့၏စွမ်းအားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားစေကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ ပို၍ ပျော်ရွှင်သော၊ ပိုမိုသာယာဝပြောသောဘဝအတွက်သင်ကအစပြုလုပ်ဆောင်ရမည် သင့်ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်.
အဲဒီသတင်းစကားကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းထိမိခဲ့တယ်။ တခြားသူတစ်ယောက်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အမြဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့သမျှအလုပ်တိုင်းကိုမုန်းခဲ့တယ်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုစတင်ရန်နှင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏အလုပ်အပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုတာ ၀ န်ယူရန်အချိန်ရောက်ပြီ။
- လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကငါဖတ်ခဲ့တယ် ဒါကပိုက်ဆံကြည့်တာကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ Robert Kiyosaki သည်အခြားသူများအတွက်သူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးနှင့်သူ၏ငွေကြေးများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အလုပ်မလုပ်ရန်ဟူသောအကြံကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်ကကျွန်ုပ်ငွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ငါအနှစ်သက်ဆုံးကတော့စာအုပ်ကရိုးရှင်းပြီးအချက်အချာကျသည်။
စာအုပ်ကို ၀ ယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကော်ဖီစားပွဲအတွက်အသုံးအဆောင်အဖြစ်သုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုငါသိတယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊
- ဟုတ်တယ်၊ ငွေရတတ်သောသူအဖေကညံ့ဖျင်းဖေ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က ငါလေ့လာသင်ယူသောအရာဖြစ်တယ် ချမ်းသာတဲ့သူတွေကလူလတ်တန်းစားတွေထက်မတူကြဘူး.
- အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်။ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သို့ငွေရှာရမည်ကိုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲငွေကြေးတစ်ခုအနေဖြင့်မည်သို့ရှုမြင်ရမည်စသည်တို့ဖြစ်သည် သင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်သော tool ကို.
- ငါသည်သင်တို့၏တစ်ခုလုံးကိုစီးရီးအကြံပြုပါသည်။ လူအများပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီစာအုပ်ကချမ်းသာဖို့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး (ဘယ်စာအုပ်ကတကယ်ကိုပေးမှာလဲ) ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကသင့်ကိုအခြေခံကောင်းတချို့ပေးပြီးအမှန်တကယ်ဘာကိုစိတ်ထဲဖွင့်ပေးမှာလဲ။ ဆိုလိုသည် ငွေကြေးအရအမှီအခိုကင်းတယ်.
စာရေးသူကိုယ်တိုင်၏ "Rich Dad, Poor Dad" စာအုပ်၏တင်ပြချက်ဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်ထားခဲ့ပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်သလား သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဤဘလော့ဂ်ကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ Facebook like ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ မင်းရဲ့အကူအညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာအုပ်များ » "Rich Dad, Poor Dad" ၏အနှစ်ချုပ်